ama-solar wind hybrid system ekhaya futhi commercial - Ningbo Haitian Holding Group Co., Ltd
igcine solar hybrid system ekhaya futhi commercial
Ngokusho eziningi lamandla ochwepheshe, encane "hybrid" uhlelo kagesi ehlanganisa umoya solar (photovoltaic) ubuchwepheshe linikeza izinzuzo eziningana phezu noma system.In olulodwa kakhulu yezindawo, umoya ngesivinini ziphansi ehlobo lapho ilanga lihlaba ezigqame omude kunayo yonke. Umoya onamandla ebusika lapho elangeni kancane iyatholakala. Ngoba isiqongo izikhathi yokusebenza ngomoya zonozungezilanga zenzeka ngezikhathi ezahlukene usuku nonyaka, izinhlelo hybrid kunamathuba amaningi okuthi ukukhiqiza amandla lapho uludinga.
1. PV wezinhlu: Kunamaphuzu amaningana PV panel ixhumeke uchungechunge kanye / noma parallel enikeza okukhipha DC aphume irradiance sigameko. Ukujayeza enyakazayo yalezi panel ibalulekile design imingcele, kanye Ukufiphaza kusukela obstructions ezizungezile.
2. Umoya ophephela: Lokhu efakwe phezu umbhoshongo ubude, iqoqa energy kinetic umoya iyiguqule ugesi ukuthi iyahambisana isimiso sikagesi ikhaya sika.
3. Hybrid isilawuli: ukulawula ibhethri yasebhange mali futhi zichithe ezinengqondo nokuphepha.
4. Ibhethri yasebhange: kungaba ibhethri olulodwa noma amabhethri amaningi axhunyiwe ndawonye ukudala bangumuntu oyedwa ibhethri enkulu edingekayo voltage-ihora amp umthamo. Ngandlela-thile ukucushwa futhi umthamo webhethri abaluleke kakhulu kwamandla kagesi isinqumo, futhi isinqumo esihlakaniphile kungasiza isiqinisekiso benamanzi kwamandla kagesi kanye uhlelo ilula yokusebenzisa nokulungisa.
5. inverter: A amandla Converter ° inverts ± amandla DC kusukela panel ku AC.
6. Imithwalo: Umi ngoba inethiwekhi ixhunyiwe zikagesi isakhiwo ezidla kusukela inverter (AC imithwalo), noma ebhange battery (DC imithwalo).